Fanamasinana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > fanamasinana
Ny fanamasinana dia asan’ny fahasoavana izay anehoan’Andriamanitra ny fahamarinana sy ny fahamasinan’i Jesoa Kristy amin’ny mino ary ampidiriny ao anatin’izany. Ny fanamasinana dia iainana amin’ny alalan’ny finoana an’i Jesoa Kristy ary tanterahina amin’ny alalan’ny fanatrehan’ny Fanahy Masina ao anatin’ny olona. (Romana 6,11; 1. Johannes 1,8-9; Romana 6,22; 2. Thessalonians 2,13; Galatiana 5, 22-23)
Araka ny Rakibolana Concise Oxford, ny hoe masina dia midika hoe "manangona na manambina zavatra masina", na "manadio na tsy afaka amin'ny ota".1 Ireo famaritana ireo dia maneho ny hoe ny Baiboly dia mampiasa ny teny hoe "masina" amin'ny fomba roa: 1) toe-javatra manokana, izany hoe, tafasaraka amin'ny fampiasana an'Andriamanitra, ary 2) fitondran-tena ara-pitondrantena - ny eritreritra sy ny asa mifanaraka amin'ny toerany masina, Ny eritreritra sy ny fihetsika izay mifanaraka amin'ny lalan'Andriamanitra.2
Andriamanitra manamasina ny olony. Izy no mampisaraka azy ho an'izay tanjony, ary io no mamela ny fitondran-tena masina. Tsy dia misy adihevitra kely momba ny teboka voalohany fa Andriamanitra dia manasaraka ny olona ho amin'ny tanjony. Saingy misy ny adihevitra momba ny fifaneraserana eo amin'Andriamanitra sy ny olona miaraka amin'ny fitondran-tena masina.
Ireo fanontaniana dia misy: Inona ny anjara asa mavitrika tokony hataon'ny kristiana amin'ny fanamasinana? Hatraiza marina no tokony hanantenan'ny Kristiana hahomby amin'ny fampifanarahana ny heviny sy ny ataony amin'ny fenitra masina? Ahoana no tokony hamporisihan'ny Fiangonana ny mpikambana ao aminy?
Hizara ireto hevitra manaraka ireto izahay:
Ny fahamasinana dia vita noho ny fahasoavan'Andriamanitra.
Ny Kristiana dia tokony hiezaka hampihavana ny eritreriny sy ny zavatra nataony araka ny sitrapon'Andriamanitra, izay ambara ao amin'ny Baiboly.
Ny fanamasinana dia fivoarana mivoatra ho valin'ny sitrapon'Andriamanitra. Hodinihintsika ny fomba niantombohan'ny fanamasinana.
Ny fanamasinana voalohany
Maloto fitondran-tena ny olona ka tsy afaka mifidy an’Andriamanitra ho azy manokana. Ny fampihavanana dia tsy maintsy atomboka amin’Andriamanitra. Ny fandraisana andraikitra feno fahasoavana avy amin’Andriamanitra dia takiana alohan’ny ahafahan’ny olona iray manana finoana sy mitodika amin’Andriamanitra. Na tsy azo toherina io fahasoavana io dia azo iadian-kevitra, fa ny Ortodoksa dia manaiky fa Andriamanitra no manao ny safidy. Mifidy olona ho amin’ny fikasany izy, ka amin’izay dia manamasina azy ireo na manokana ho an’ny hafa. Tamin’ny andro fahiny, dia nohamasinin’Andriamanitra ny vahoakan’ny Isiraely, ary tao anatin’ireo olona ireo dia nanohy nanamasina ny Levita Izy (oh. 3. Mosesy 20,26:2; 1,6; 5 Mon. 7,6). Notokanany ho amin’ny fikasany izy ireo.3
Ny kristiana anefa dia voatokana amin’ny fomba hafa: “izay nohamasinina tao amin’i Kristy Jesosy” (1. Korintiana 1,2). “Nohamasinina indray mandeha mandrakizay isika tamin’ny soron’ny tenan’i Jesosy Kristy” (Hebreo 10,10).4 Nohamasinina tamin’ny ran’i Jesosy ny Kristianina (Hebreo 10,29; 12,12). Nambara ho masina izy ireo (1. Petrus 2,5. 9) ary antsoina hoe “olo-masina” manerana ny Testamenta Vaovao izy ireo. Izany no satan'izy ireo. Ity fanamasinana voalohany ity dia toy ny fanamarinana (1. Korintiana 6,11). "Andriamanitra efa nifidy anareo ho amin'ny famonjena amin'ny fanamasinana ny Fanahy" (2. Thessalonians 2,13).
Ny fikasan’Andriamanitra ho an’ny olony anefa dia mihoatra noho ny fanambarana tsotra ny amin’ny sata vaovao — natokana ho an’ny fampiasana azy izany, ary ny fampiasana azy dia misy fiovana ara-pitondran-tena eo amin’ny vahoakany. Ny olona dia “voafidy ... hankato an’i Jesosy Kristy” (1. Petrus 1,2). Tokony hovana ho tahaka ny endrik’i Jesoa Kristy izy ireo (2. Korintiana 3,18). Tsy hoe tokony hambara ho masina sy marina fotsiny izy ireo, fa nateraka indray koa. Fiainana vaovao no manomboka mivelatra, fiainana tokony hitondra tena amin’ny fomba masina sy mahitsy. Noho izany, ny fanamasinana voalohany dia mitarika ho amin'ny fanamasinana ny fitondrantena.
Fanamasinana ny fitondran-tena
Na dia ao amin’ny Testamenta Taloha aza, dia nilaza tamin’ny olony Andriamanitra fa ny maha-masina azy ireo dia ahitana fiovan’ny fitondran-tena. Tsy maintsy nisoroka ny fahalotoana ara-pivavahana ny Isiraelita satria nofidin’Andriamanitra izy ireo4,21). Niankina tamin’ny fankatoavan’izy ireo ny maha-masina azy ireo8,9). Ny mpisorona dia tokony hamela ny fahotana sasany satria masina ireo (3. Mosesy 21,6-7). Tsy maintsy nanova ny fitondran-tenany ireo mpivavaka rehefa voatokana (4. Mosesy 6,5).
Ny fifidianana antsika ao amin'i Kristy dia misy fiantraikany amin'ny etika. Koa satria niantso antsika ny Olomasina, dia nampirisihina ny Kristianina mba “ho masina amin’ny dianareo rehetra” (1. Petrus 1,15-16). Amin’ny maha olom-boafidin’Andriamanitra antsika, dia tokony haneho fangoraham-po, fahamoram-panahy, fanetren-tena, fahalemem-panahy, ary faharetana isika ( Kolosiana. 3,12).
Ny ota sy ny fahalotoana dia tsy an’ny olon’Andriamanitra (Efes 5,3; 2. Thessalonians 4,3). Rehefa manadio tena amin’ny fikasana mahamenatra ny olona, ​​dia “hohamasinina” (2. Timoty 2,21). Tokony hifehy ny vatantsika amin'ny fomba masina isika (2. Thessalonians 4,4). Ny hoe “masina” dia matetika mifandray amin’ny hoe “tsy manan-tsiny” (Efes 1,4; 5,27; 2. Thessalonians 2,10; 3,13; 5,23; TITOSY 1,8). “Nantsoina ho masina” ny Kristianina (1. Korintiana 1,2), "Hitarika ny dia masina" (2. Thessalonians 4,7; 2. Timoty 1,9; 2. Petrus 3,11). Notarihina isika mba “hikatsaka ny fanamasinana” (Hebreo 12,14). Ampirisihina isika mba ho masina (Romana 12,1), lazaina fa “nohamasinina” isika (Hebreo 2,11; 10,14), ary ampirisihina isika mba hanohy ho masina (Apokalypsy 2 Des.2,11). Manamasina antsika noho ny asan’i Kristy sy ny fanatrehan’ny Fanahy Masina ao anatintsika. Manova antsika avy ao anaty Izy.
Ity fandinihana fohy ny teny ity dia mampiseho fa misy ifandraisany amin’ny fitondran-tena ny fahamasinana sy ny fanamasinana. Andriamanitra dia nanokana ny olona ho “masina” mba hananany fiainana masina amin’ny fanarahana an’i Kristy. Voavonjy isika mba hamoa ny asa tsara sy ny voa tsara (Efes 2,8-10; Galatianina 5,22-23). Ny asa tsara dia tsy mahatonga ny famonjena, fa vokatry izany.
Ny asa tsara dia porofo fa tena misy ny finoan’ny olona iray (Jak 2,18). Niresaka momba ny “fankatoavan’ny finoana” i Paoly ary nilaza fa ny fitiavana no anehoana ny finoana (Romana 1,5; Galatianina 5,6).
Ny fitomboan'ny fiainana
Rehefa mino an'i Kristy ny olona dia tsy lavorary amin'ny finoana, ny fitiavana, ny asa na ny fitondran-tena. Niantso ireo olomasina sy mpirahalahy ho an'ny Korintiana i Paoly, saingy maro ny fahotana teo amin'ny fiainany. Ireo fananarana maro ao amin'ny Testamenta Vaovao dia manondro fa ny mpamaky dia tsy ny torolalana amin'ny fampianarana fotsiny, fa ny fananarana momba ny fitondran-tena koa. Manova antsika ny Fanahy Masina, saingy tsy manavesatra ny sitrapon'olombelona; ny fiainana masina dia tsy mandeha avy hatrany amin'ny finoana. Ny Kristy rehetra dia tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra momba ny hanao ny tsara na ny ratsy, na dia i Kristy aza miasa ao amintsika hanova ny faniriantsika.
Mety efa maty ilay “izaho taloha”, nefa tsy maintsy mandao izany koa ny Kristianina (Romana 6,6-7; Efesianina 4,22). Tsy maintsy mamono ny asan’ny nofo isika, dia ny sisan’ny toetra taloha (Romana 8,13; Kolosiana 3,5). Na dia maty tamin’ny ota aza isika, dia mitoetra ao anatintsika ny ota ka tsy tokony havelantsika hanjaka (Romana 6,11-13). Ny eritreritra, ny fihetseham-po ary ny fanapahan-kevitra dia tokony hovolavolaina araka ny fomban'Andriamanitra. Ny fahamasinana dia zavatra tokony hotadiavina (Hebreo 12,14).
Angatahina isika mba ho lavorary sy ho tia an’Andriamanitra amin’ny fontsika rehetra (Mat 5,48;
22,37). Noho ny fetran’ny nofo sy ny sisa tavela amin’ny toetra taloha, dia tsy afaka ny ho tonga lafatra toy izany isika. Na i Wesley aza, izay niteny tamim-pahasahiana momba ny “fahalavorariana”, dia nanambara fa tsy ny tsy fisian’ny tsy fahatanterahana tanteraka no tiany holazaina.5 Ny fitomboana dia azo atao ary baiko. Raha manana fitiavana Kristiana ny olona iray, dia hiezaka ny hianatra ny fomba hisehoana izany tsara kokoa izy, miaraka amin'ny fahadisoana vitsy kokoa.
Sahy nilaza ny apostoly Paoly fa “masina, mahitsy, tsy misy tsiny” ny fitondran-tenany.2. Thessalonians 2,10). Tsy nihambo ho lavorary anefa izy. Nanatratra izany tanjona izany kosa izy ary nananatra ny hafa mba tsy hieritreritra hoe efa tratrany ny tanjony 3,12-15). Mila famelan-keloka ny Kristianina rehetra (Mat 6,12; 1. Johannes 1,8-9) ary tsy maintsy mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana (2. Petrus 3,18). Tokony hitombo mandritra ny fiainana ny fanamasinana.
Tsy ho tanteraka anefa ny fanamasinana antsika eto amin’ity fiainana ity. Manazava toy izao i Grudem: “Rehefa mankasitraka isika fa tafiditra ao anatin’ny fanamasinana ny olona manontolo, anisan’izany ny vatantsika (2. Korintiana 7,1; 2. Thessalonians 5,23), dia fantatsika fa tsy ho tanteraka tanteraka ny fanamasinana mandra-piverin’ny Tompo ka hahazo vatana fitsanganana amin’ny maty isika.”6 Amin’izay isika vao ho afaka amin’ny ota rehetra ka homena vatana be voninahitra toa an’i Kristy. ( Filipiana 3,21; 1. Johannes 3,2). Noho izany fanantenana izany dia mitombo amin'ny fahamasinana isika amin'ny fanadiovana ny tenantsika (1. Johannes 3,3).
Fananarana ara-baiboly hamasinina
Nahita pastora ny fananana pastora tokony handrisika ny mahatoky amin'ny fankatoavana azo ampiharina avy amin'ny fitiavana. Ny Testamenta Vaovao dia ahitana fananarana maro toy izany, ary mety ny hitory azy ireo. Mety ny fanao amin'ny vatofantsika amin'ny fironan'ny fitiavana ary amin'ny farany
ny firaisan-tsaintsika amin'i Kristy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina izay loharanon'ny fitiavana.
Na dia manome voninahitra an’Andriamanitra aza isika ary mahatsapa fa ny fahasoavana dia tokony hanomboka ny fitondran-tenantsika rehetra, dia mamarana koa isika fa misy fahasoavana toy izany ao am-pon'ny mpino rehetra ary mamporisika azy ireo hamaly an'io fahasoavana io isika.
McQuilken dia manolotra azo ampiharina fa tsy fomba dogmatika.7 Tsy manizingizina izy fa ny mpino rehetra dia manana traikefa mitovy amin'ny fanamasinana. Manohana idealy avo izy, saingy tsy misy fahatanterana. Tsara ny famporisihany hanompo ho vokatra vokatry ny fanamasinana. Nasongadiny ny fampitandremana an-tsoratra momba ny fivadiham-pinoana fa tsy terena amin'ny fehin-kevitra teolojika momba ny faharetan'ny olona masina.
Ny fanamafisana ny finoana dia mahasoa satria ny finoana no fototry ny kristianisma rehetra, ary ny finoana dia misy fiantraikany azo ampiharina amin'ny fiainantsika. Ny fomba fivoarana dia azo ampiharina: ny vavaka, ny soratra masina, ny fiarahana ary ny fahatokisana amin'ny fitsapana. Nampirisika ny Kristiana i Robertson hitombo sy hijoro ho vavolombelona nefa tsy manabe ny fangatahana sy ny fanantenany.
Ampirisihina ny Kristiana mba ho tonga tahaka ny toetran'izy ireo taorian'ny fanambaran'Andriamanitra; ny tsy ilaina dia manaraka ny famantarana. Ny Kristiana dia tokony hiaina fiainana masina satria nanambara azy ireo ho masina sy nokasaina Andriamanitra.
2 Ao amin'ny Testamenta Taloha (OT) masina Andriamanitra, masina ny anarany, ary izy no olo-masina (miseho mihoatra ny 100 heny ny fitambarany). Ao amin'ny Testamenta Vaovao (NT) "masina" dia mihatra matetika amin'i Jesosy noho ny amin'ny Ray (in-14 mifanohitra in-telo), fa matetika kokoa amin'ny Fanahy (in-sivifolo). Ny OT dia manondro ny olona masina (olona voatokana, pretra ary ny vahoaka) intelo heny, mazàna amin'ny lafiny misy azy ireo; ny NT dia miresaka momba ny olona masina im-36. Ny OT dia manondro toerana masina manodidina ny 50 fotoana; ny NT in-110 fotsiny. Ny OT dia manondro zavatra masina manodidina ny in-17; ny NT intelo fotsiny ho toy ny sary ho an'ny vahoaka masina. Ny OT dia miresaka fotoana masina ao amin'ny andininy 70; ny NT dia tsy mamaritra mihitsy ny fotoana ho masina. Mifandraika amin'ny toerana, zavatra ary fotoana, ny fahamasinana dia manondro toerana voatondro fa tsy fitondran-tena mendrika. Amin'ny sitrapo roa dia masina Andriamanitra ary avy aminy ny fahamasinana, fa ny fomba fiantraikan'ny fahamasinana amin'ny olona dia tsy mitovy. Ny fanamafisan'ny Testamenta Vaovao ny fahamasinana dia mifandraika amin'ny olona sy ny fihetsiny fa tsy amin'ny toerana manokana ho an'ny zavatra, toerana ary fotoana.
3 Ao amin'ny OT indrindra indrindra, ny fanamasinana dia tsy midika ho famonjena. Miharihary izany satria efa nohamasinina koa ireo zavatra sy toerana ary fotoana, ary mihatra amin’ny vahoakan’ny Isiraely izany. Ny fampiasana ny teny hoe "fanamasinana" izay tsy miresaka momba ny famonjena dia azo jerena ao amin'ny 1. Korintiana 7,4 mahita - ny tsy mpino dia napetraka tao amin'ny sokajy manokana ho an'Andriamanitra amin'ny fomba iray. Hebreo 9,13 dia mampiasa ny teny hoe "masina" mba hilazana sata ara-pivavahana eo ambanin'ny fanekena taloha.
4 Grudem dia nanamarika fa ao amin'ny andalan-tsoratra maro amin'ny teny hebreo ny teny hoe "nohamasinina" dia mitovy amin'ny teny hoe "nohamarinina" ao amin'ny voambolana nataon'i Paul (W. Grudem, Systematic Theology, Zondervan 1994, p. 748, note 3.)
5 John Wesley, "A Plain Account of Christian Perfection," ao amin'ny Millard J. Erickson, ed. Readings in Christian Theology, Volume 3, The New Life (Baker, 1979), 159.
6 Grudem, p. 749.
7 J. Robertson McQuilken, "The Keswick Perspective," Fomba fijery dimy momba ny fanamasinana (Zondervan, 1987), pp. 149-183.